Gabriel Jesus oo ka jawaab celiyay wararka la xiriirinaya inuu ku biirayo Real Madrid – Gool FM
(Manchester) 28 Feb 2020. Weeraryahanka reer Brazil iyo kooxda Manchester City ee Gabriel Jesus ayaa ka jawaab celiyay wararka la xiriirinaya inuu ku biirayo Real Madrid.
Gabriel Jesus ayaa wuxuu si cad u xaqiijiyay inuu ku faraxsan yahay joogitaankiisa kooxda reer England ee Manchester City, isla markaana uusan ku fikireynin inuu baxo.
Jesus ayaa si qurux badan kaga soo muuqday kulankii lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League ay kooxdiisa Manchester City la ciyaartay Real Madrid, isagoo dhaliyay goolkii barbaraha, xilli kulankaas uu ku soo idlaaday 1-2 ay ku soo adkaatay Skay Blues.
Haddaba sida laga soo xigtay wargeyska “AS” ee dalka Spain Gabriel Jesus ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay wararka la xiriirinaya inuu ku biirayo Real Madrid wuxuuna yiri:
“Inaan ku biirayo Real Madrid? waxaan qandaraas kula jiraa Man City, waana ku faraxsanahay wax qabadkeyga kooxda ee xilli ciyaareedkan, kulamada aan u ciyaaray iyo goolasha aan dhalinayo, iyo sida aan u caawinayo kooxda”.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay Manchester City, kumana fekerayo ka tagista iyo u dhaqaaqista koox kale” ayuu yiri xiddiga reer Brazil ee Gabriel Jesus.